HomeKnowledgeသှေးတိုးခွငျးကို ၁၀ မိနဈအတှငျး သကျသာသှားစမေယျ့ အလှယျကူဆုံး နညျးလမျးမြား
လူအမြားစုက ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ပငျပနျးခွငျး၊ နှလုံးခုနျမမှနျခွငျး၊ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး၊ သှေးတိုးခွငျးတှေ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ စိတျပငျပနျးခွငျး၊ အိပျခြိနျနညျးခွငျး၊ အလှနျခွငျးစတဲ့ အကွောငျးအရာတှကွေောငျ့ သှေးတိုးပါတယျ။ သှေးတိုးတာတှကေို ဖွလြှေော့ပေးပွီး သှေးတိုးကို ထိနျးညှိပေးနိုငျမယျ့ လှယျလှယျကူကူ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
8. လညျပငျးနှငျ့ နားရှကျကွားကို နှိပျနယျပေးခွငျး
ခေါငျးနဲ့ လညျပငျးမှာ ပါတဲ့ အမှတျသုံးခုက နှဈမိနဈ အတှငျး သှေးတိုးကစြေ မှာပါ။ ပထမ အမှတျက နားရှကျ အောကျခွေ တညျ့တညျ့ဖွဈပွီး ဒုတိယအမှတျက ပထမအမှတျနဲ့ တနျးတနျး လညျပငျးရဲ့ တဈဝကျလောကျမှာ ရှိပါတယျ ။ အဲဒီအမှတျ နှဈခုကို အပျေါအောကျ ရှပွေီ့း ညငျညငျသာသာ နှိပျပေးရမှာပါ။
လညျပငျး နှဈဖကျ လုံးကို မိနဈ အနညျးငယျ ကွာအောငျ နှိပျပေးပါ။ တတိယ အမှတျက နားရှကျအောကျခွထေကျ2စငျတီမီတာ ပိုမွငျ့ပွီး မကျြနှာပျေါမှာ ရှိပါတယျ။ တတိယ အမှတျ နရောကို နာရီလကျတံ အတိုငျး နှိပျနယျပေးပါ။
ဒီလို နှိပျနယျပေးခွငျးက လညျပငျးကွှကျသားတှေ တငျးနတောကို ပွလြေော့စပွေီး ဦးနှောကျဆီ သှေးစီးဆငျးမှု ကိုလညျး ကောငျးမှနျစေ ပါတယျ။
7. ဦးခေါငျး အနောကျဘကျကို နှိပျပေးခွငျး
ဦးခေါငျးရဲ့ အနောကျ အောကျဘကျက ခြိုငျ့ခှကျနရောက ခေါငျးရဲ့ ဘယျဘကျကော ညာဘကျမှာပါ ပါဝငျပါတယျ။ အဲဒီ ခြိုငျ့ခှကျနရောကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး နှိပျပေးရမှာပါ။2မိနဈအတှငျးမှာ ခေါငျးကိုကျပြောကျပွီး အဆငျပွသှေား မှာပါ ။
6. ဘယျဘကျနှာခေါငျးဖွငျ့ အသကျရှူခွငျး
ဘယျဘကျနှာခေါငျးနဲ့ အသကျရှူခွငျးက သှေးကွောတှကေို ပွလြေော့စပွေီး စိတျဖိအားဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှကေို လြှော့ပေးလို့ သှေးတိုးကစြေ ပါတယျ။
- ထိုငျခုံ သို့မဟုတျ ကွမျးပွငျပျေါမှာ ခါးမတျမတျ ထိုငျပါ။
- ဗိုကျပျေါကို ဘယျဘကျလကျ တငျထားပါ။
- ဘယျဘကျနှာခေါငျးနဲ့ အသကျကို အကွာကွီး ရှူပွီး ပွနျထုတျလိုကျပါ။
- ဘယျဘကျနှာခေါငျးနဲ့ အသကျရှူသှငျး ရှူထုတျတာကို3မိနဈ ကနေ5မိနဈ အထိ ကွာအောငျ ပွုလုပျပေးပါ။
5. ပြား အသကျရှူခွငျး
Bhramari Pranayama လို့ချေါတဲ့ ပြားအသကျရှူနညျးက သှေးတိုးခွငျးနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို ပြောကျကငျးစေ ပါတယျ။
- ကွမျးပွငျပျေါမှာ ခါးမတျမတျထားပွီး ထိုငျပါ။
- လကျညှိုးကို နားရဲ့အရိုးနုပျေါမှာ သာသာလေး တငျထားပါ။
- ပွီးတော့ အသကျရှူသှငျးလိုကျပါ။
- အသကျရှူလိုကျတဲ့ အခါ ပြားအျောနသေလို တဝီဝီ အသံကို ကွားရမှာပါ။
- ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို7ကွိမျကနေ 10 ကွိမျအထိ ပွုလုပျနိုငျ ပါတယျ။
4. ဂန်တဝငျ သီခငျြးမြားကို နားထောငျခွငျး
ငွိမျ့ညောငျးတဲ့ ဂန်တဝငျသီခငျြးတှကေို နားထောငျခွငျးက သှေးတိုးကစြေ ပါတယျ။ ဂန်တဝငျ သီခငျြးတှကေ စိတျကို တညျငွိမျစပွေီး စိတျဖိအားဖွဈစတေဲ့ ဟျောမုနျးတှကေို လြှော့ကစြေ ပါတယျ။
ရဓောတျခနျးခွောကျခွငျး ကွောငျ့လညျး သှေးတိုးပါတယျ။ ရဓောတျလိုလာပွီ ဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျက သှေးထုထညျတှကေ ကဆြငျးလာ ပါတယျ။ သှေးတိုးတော့မယျလို့ ခံစားမိ လာတိုငျး ရနှေဈခှကျခနျ့ သောကျပေးပါ။
ပကျလကျအိပျခွငျးက နှလုံးခုနျနှုနျးကို နညျးသှားစပွေီး သှေးတိုးကို သိသိသာသာ ကစြေ ပါတယျ။ ပကျလကျအိပျပွီး ကွှကျသားတှကေို ဖွလြှေော့လိုကျပါ။ 10 မိနဈ၊ 15 မိနဈခနျ့ အိပျရငျ သှေးတိုးသကျသာလာတာကို တှရေ့မှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ပကျလကျအိပျခွငျးက အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျး အတှကျလညျး ကောငျးစပေါတယျ။
1. ခွထေောကျကို ရနှေေးစိမျခွငျး
ခွထေောကျကို ရနှေေးစိမျခွငျးက ခေါငျးနဲ့လညျပငျးကို အေးသှားစပွေီး ဦးနှောကျထဲကို သှေးတဈဟုနျထိုး ဝငျရောကျမှုကို ဟနျ့တားပေးပါတယျ။ ဇလုံထဲကို ရနှေေးထညျ့ပွီး 10 မိနဈ၊ 15 မိနဈကွာ ခွထေောကျ ရစေိမျပေးရုံပါပဲ။ ခေါငျးက သှေးတှကေ ခွထေောကျဆီကို ရောကျလာပွီး သှေးတိုးတာ ငွိမျသှားပါတယျ။
သှေးတိုးခွငျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး
ဘောလုံးလေးတှကေို ညှဈခွငျးက သှေးကွောတှကေို ပုံမှနျဖွဈစေ ပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈပတျကို သုံးကွိမျ၊ တဈကွိမျကို 15 မိနဈခနျ့ ပွုလုပျပေးရမှာပါ။ တလကွာတဲ့အခါ သှေးတိုးတာ 10 ရာခိုငျနှုနျး လြော့သှားတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။
သွေးတိုးခြင်းကို ၁၀ မိနစ် အတွင်း သက်သာသွားစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းများ
လူအများစုက ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းခြင်း၊ အိပ်ချိန်နည်းခြင်း၊ အလွန်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့် သွေးတိုးပါတယ်။ သွေးတိုးတာတွေကို ဖြေလျှော့ပေးပြီး သွေးတိုးကို ထိန်းညှိပေးနိုင်မယ့် လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
8. လည်ပင်းနှင့် နားရွက်ကြားကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်း
ခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းမှာ ပါတဲ့ အမှတ်သုံးခုက နှစ်မိနစ် အတွင်း သွေးတိုးကျစေ မှာပါ။ ပထမ အမှတ်က နားရွက် အောက်ခြေ တည့်တည့်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအမှတ်က ပထမအမှတ်နဲ့ တန်းတန်း လည်ပင်းရဲ့ တစ်ဝက်လောက်မှာ ရှိပါတယ် ။ အဲဒီအမှတ် နှစ်ခုကို အပေါ်အောက် ရွေ့ပြီး ညင်ညင်သာသာ နှိပ်ပေးရမှာပါ။ လည်ပင်း နှစ်ဖက် လုံးကို မိနစ် အနည်းငယ် ကြာအောင် နှိပ်ပေးပါ။ တတိယ အမှတ်က နားရွက်အောက်ခြေထက်2စင်တီမီတာ ပိုမြင့်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ တတိယ အမှတ် နေရာကို နာရီလက်တံ အတိုင်း နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဒီလို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းက လည်ပင်းကြွက်သားတွေ တင်းနေတာကို ပြေလျော့စေပြီး ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်းမှု ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။
7. ဦးခေါင်း အနောက်ဘက်ကို နှိပ်ပေးခြင်း
ဦးခေါင်းရဲ့ အနောက် အောက်ဘက်က ချိုင့်ခွက်နေရာက ခေါင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ကော ညာဘက်မှာပါ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ ချိုင့်ခွက်နေရာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ်ပေးရမှာပါ။2မိနစ်အတွင်းမှာ ခေါင်းကိုက်ပျောက်ပြီး အဆင်ပြေသွား မှာပါ ။
6. ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းဖြင့် အသက်ရှူခြင်း
ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူခြင်းက သွေးကြောတွေကို ပြေလျော့စေပြီး စိတ်ဖိအားဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို လျှော့ပေးလို့ သွေးတိုးကျစေ ပါတယ်။
- ထိုင်ခုံ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခါးမတ်မတ် ထိုင်ပါ။
- ဗိုက်ပေါ်ကို ဘယ်ဘက်လက် တင်ထားပါ။
- ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ကို အကြာကြီး ရှူပြီး ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ။
- ဘယ်ဘက်နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်တာကို3မိနစ် ကနေ5မိနစ် အထိ ကြာအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
5. ပျား အသက်ရှူခြင်း
Bhramari Pranayama လို့ခေါ်တဲ့ ပျားအသက်ရှူနည်းက သွေးတိုးခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ ပါတယ်။
- ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခါးမတ်မတ်ထားပြီး ထိုင်ပါ။
- လက်ညှိုးကို နားရဲ့အရိုးနုပေါ်မှာ သာသာလေး တင်ထားပါ။
- ပြီးတော့ အသက်ရှူသွင်းလိုက်ပါ။
- အသက်ရှူလိုက်တဲ့ အခါ ပျားအော်နေသလို တဝီဝီ အသံကို ကြားရမှာပါ။
- ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို7ကြိမ်ကနေ 10 ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။
4. ဂန္တဝင် သီချင်းများကို နားထောင်ခြင်း
ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂန္တဝင်သီချင်းတွေကို နားထောင်ခြင်းက သွေးတိုးကျစေ ပါတယ်။ ဂန္တဝင် သီချင်းတွေက စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး စိတ်ဖိအားဖြစ်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို လျှော့ကျစေ ပါတယ်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း ကြောင့်လည်း သွေးတိုးပါတယ်။ ရေဓာတ်လိုလာပြီ ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးထုထည်တွေက ကျဆင်းလာ ပါတယ်။ သွေးတိုးတော့မယ်လို့ ခံစားမိ လာတိုင်း ရေနှစ်ခွက်ခန့် သောက်ပေးပါ။
ပက်လက်အိပ်ခြင်းက နှလုံးခုန်နှုန်းကို နည်းသွားစေပြီး သွေးတိုးကို သိသိသာသာ ကျစေ ပါတယ်။ ပက်လက်အိပ်ပြီး ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့လိုက်ပါ။ 10 မိနစ်၊ 15 မိနစ်ခန့် အိပ်ရင် သွေးတိုးသက်သာလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ပက်လက်အိပ်ခြင်းက အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်း ကောင်းစေပါတယ်။
1. ခြေထောက်ကို ရေနွေးစိမ်ခြင်း
ခြေထောက်ကို ရေနွေးစိမ်ခြင်းက ခေါင်းနဲ့လည်ပင်းကို အေးသွားစေပြီး ဦးနှောက်ထဲကို သွေးတစ်ဟုန်ထိုး ဝင်ရောက်မှုကို ဟန့်တားပေးပါတယ်။ ဇလုံထဲကို ရေနွေးထည့်ပြီး 10 မိနစ်၊ 15 မိနစ်ကြာ ခြေထောက် ရေစိမ်ပေးရုံပါပဲ။ ခေါင်းက သွေးတွေက ခြေထောက်ဆီကို ရောက်လာပြီး သွေးတိုးတာ ငြိမ်သွားပါတယ်။
သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်း
ဘောလုံးလေးတွေကို ညှစ်ခြင်းက သွေးကြောတွေကို ပုံမှန်ဖြစ်စေ ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်၊ တစ်ကြိမ်ကို 15 မိနစ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။ တလကြာတဲ့အခါ သွေးတိုးတာ 10 ရာခိုင်နှုန်း လျော့သွားတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။